ဖေ‌ဖျောဝါရီ 11, 2020 – Healthy Life Journal
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်က ဆေးမြီးတိုတွေ၊ အထူးသဖြင့် လေဆေးသောက်ရင် မွေးလာတဲ့ကလေးမှာ လေမပါဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ အဲဒီလို လေဆေးသောက်တာကြောင့် ကလေးမှာ တခြားထိခိုက်မှုကော ဖြစ်စေနိုင်ပါသလား ဆရာ။ A. ဆေးတွေသောက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေကို သေချာပြောပြလိုပါတယ်။...
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှာ စုံတွဲပုံတွေတင်လိုက်၊ ချစ်ကြောင်း၊ ကြင်နာကြောင်းတွေ ရေးပြလိုက်. . ဒီလိုမြင်တွေ့ရတော့ အားကျနေမိပါသလား . တကယ်ပျော်ရွှင်တဲ့ စုံတွဲတွေကတော့ သူတို့အကြောင်းတွေကို အွန်လိုင်းမှာ ဘာကြောင့် မတင်ရသလဲဆိုတာကို အခုလို ပြောပြထားပါတယ်။ တကယ်ပျော်ကြောင်း သူများအသိအမှတ်ပြုစရာ မလိုဘူး လူတစ်ယောက်က အိမ်ထောင်ရေးမှာ...
ယခင်တစ်ပတ်မှအဆက် ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ စိတ်နဲ့ခန္ဓာ ဆက်စပ်ပုံ စိတ်ပြောင်းလဲတဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး (physiology) ဇီဝဗေဒပြောင်းလဲခြင်းတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- Autonomic nervous system activation အော်တိုနိုးမိတ်ခ် အာရုံကြောစနစ်တွေကို လှုံ့ဆော်ပေးခြင်း၊...